Mayelana NATHI - Wilk International Trade (Weifang) Co., Ltd.
I-Wilk International Trade (Weifang) Co., Ltd.ibhizinisi elibanzi elihlanganisa ucwaningo lwesayensi, ukukhiqiza nokuthengisa. Itholakala eLaizhou City, eSifundazweni saseShandong, isisekelo esikhulu sokukhiqiza imishini yokwakha, imishini yokwakha nemishini yezolimo ezweni. Ukukhiqizwa okuyinhloko: Amasondo Wamasondo, abembayo, ama-Self Loading Concrete Mixers, iloli le-forklift elingu-4, iBackhoe Loader neminye imishini emincane yokwakha. Njengamanje, ibhizinisi lihlanganisa amazwe angaphezu kuka-60 nezifunda ezibandakanya iJapan, iSouth Korea, iBrazil, iMexico, iDaily, i-Australia, iNingizimu Afrika kanye neMpumalanga Ephakathi, i-Asia Ephakathi, i-Southeast Asia, ne-European Union.
Inkampani yethu ikakhulukazi ikhiqiza ama-Loader, ama-excavers, ama-Self Loading Concrete Concers, ama-4 wheel drive forklift truck njll. Imikhiqizo ithengiswa kakhulu ezifundazweni ezingaphezu kwezingu-20 eChina futhi ithumela emazweni amaningi nasezifundeni zase-Afrika, eNingizimu-mpumalanga ye-Asia, eNingizimu Melika naseRussia.
Le nkampani isebenzisa ubuchwepheshe baseJalimane ukukhiqiza, iqongelela isipiliyoni, futhi ihlanganise ukuthuthuka okuqhubekayo kusuka kulwazi lwempendulo olusetshenziswa abasebenzisi abavela emhlabeni wonke, icubungula ngokugcwele izidingo zangempela zabasebenzisi, futhi kancane kancane isungula uhlelo lokuqapha ukuphathwa kwekhwalithi ephezulu kakhulu ephelele, esheshayo futhi ifike ngesikhathi ngemuva kokuthengisa izingxenye zokunikezela ngenethiwekhi. Ngokuya ngemodeli yokuthuthukiswa kwebhizinisi, ihambisana nenkambiso yentuthuko ye-e-commerce, futhi ihlola umgwaqo omusha "Wokukhiqiza ngokwendabuko" we-Intanethi olungele ukuzithuthukisa.
Izinga nokusebenza kwama-loaders ethu kanye neloli eliyi-4 wheel drive forklift lisendaweni ehamba phambili embonini esizweni sonke futhi lamukelwa kahle ngabasebenzisi. Manje, "WIK" brand Wheel loaders kanye ne-Self Loading Concrete Mixers bathole ukwamukelwa ngabathengisi futhi basebenzisa iChina yonke.
Sigxila kwikhwalithi, ekusebenzeni nasekucabangeni kwabasebenzisi njengokujwayelekile. Kubaphathi, sizuze izinga elisha ngokusebenzisa i-ISO9001: 2000 uhlelo lokuphathwa kwekhwalithi yamazwe omhlaba.
Ifilosofi yenkampani yile: ukufuna iqiniso nokuqamba izinto ezintsha, ukufuna ukusinda ngekhwalithi, ukufuna ukuthuthuka ngobuchwepheshe obusha, ukufuna isiqinisekiso ngenkonzo enhle nephelele, ukuzidlula ngokwethu, nokulwela ukudala uphawu lomhlaba jikelele. Futhi i-R & D engapheli nokuqanjwa okusha. Ukwenza imikhiqizo nezinsizakalo zokuncintisana kumakhasimende ethu.